Imbeko 8S: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
Imbeko 8S: Uluhlu lokungena olutsha lwegama elitsha
Imbeko isishiyile iifowuni ezimbalwa ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Uphawu lwaseTshayina sele lubonisile i-Honor 20i kutsha nje. Kwezi veki bekukho nazo ukuvuza okuthile kwimodeli entshaI-8S. Okokugqibela, le fowuni sele inikezelwe ngokusemthethweni. Kwinto esele sinayo yonke iinkcukacha malunga nale Honor 8S. Yinqanaba elitsha lokungena kwi-smartphone yohlobo lwaseTshayina.
Inyani yile yokuba le Honor 8S intsha inayo uthotho lwezinto ezifanayo neHuawei Y5 2019 que ibiziswe izolo ngokufanayo. Ukusuka kwinto esinokubona ukuba ezi ntlobo zimbini ziqhubeka nokwabelana ngezinto ezininzi malunga noku. Imodeli ethembisa ukuhambisa kuluhlu lokungena.
Kwinqanaba loyilo asifumani mangaliso. Njengoko sele ixhaphakile kwimarike yangoku ye-Android, sifumana isikrini nenotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Uyilo esilubonayo phantse kuzo zonke iifowuni ezikhoyo ngoku kwintengiso.
1 Ukubalulwa kwe-Honor 8S
Ukubalulwa kwe-Honor 8S
Ukucaciswa kwale Honor 8S kuthobekile, njengoko unokulindela kwi-smartphone kuluhlu lwayo. Nangona ihambelana kakuhle noko kulindeleke kuyo. Siyabona ukuba inezinto ezifanayo neHuawei Y5, njengoko besesitshilo. Ke ziifowuni ezilinganayo kuye nawuphi na umsebenzisi onomdla nakweyiphi na kuzo. Oku kukucaciswa kwayo:
Isikrini: 5,71 intshi HD + isisombululo 1520 x 720 pixels
InkquboImediaTek Helio A22
Ukugcina ngaphakathi: I-32 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
Ikhamera yangaphambiliI-5 MP FF ene-f / 2.2
Cámara trasera: 13 MP AF kunye nokuvula f / 1.8
Ibhetri: I-3.020 mAh
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie ene-EMUI 9.0
ConectividadI-Bluetooth, i-WiFi 802.11 a / c, i-LTE, i-4G, i-GPS, i-GLONASS
abanye: Ukuqwalaselwa kobuso
UbukhuluUbukhulu: 147,13 x 70,78 x 8,45 mm
U bunzima: Iigram ezili-146
Njengesiqhelo kwiifowuni ezikuluhlu lokufaka, i-Honor 8S ayinaso isivamvo somnwe. Endaweni yoko, uphawu lwaseTshayina luzise ukuvula ubuso kuyo. Kuqhelekile ukubona ii-brand zisenza oku kumgangatho osezantsi. Ngokuqinisekileyo ayizukubamba abasebenzisi abaninzi bengalindelanga. Kwiskrini, inkampani ihlala ingezantsi kwee-intshi ezi-6, into esele ixhaphake kakhulu kuluhlu olusezantsi. Inkqubo yeMediaTek iyasetyenziswa. Into enokungaqinisekisi wonke umntu.
Iikhamera ziqhuba kakuhle kwifowuni kwicandelo layo lentengiso. Ibhetri nayo kufuneka isebenze kakuhle, kuba ayiyiyo ifowuni enokusebenzisa okuphezulu njengezinye iimodeli ezinamandla ngakumbi. Yintoni egqithisile, iza ngoku ngePie ye-Android, Eziziindaba ezimnandi ngokuqinisekileyo kubasebenzisi abanomdla kuyo. Ifowuni ngaphandle kwamaqhinga amaninzi, kodwa loo nto isebenza kakuhle ngokwendlela yokusebenza kunye nexabiso elifanelekileyo lemali.
Ngokungafaniyo nakwezinye iimeko, ifowuni khange ivezwe e-China. Kodwa kule meko i-Honor 8S Sele ithengisiwe eRashiya. Ilizwe liyimarike efumana ukuqaqamba kwezi veki. Kuba siyabona ukuba sikhethiweyo kwiimveliso ezininzi kwi-Android ukumilisela iifowuni zazo kwindawo yokuqala.
Abo banomdla kwifowuni banokuyithenga ngemibala emithathu: eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama kunye negolide. Ikhutshwe kuhlobo olunye, ngokwe-RAM kunye nokugcinwa, njengoko sibonile kwinkcazo yayo. Ixabiso layo eRashiya yi-8.490 engange, emalunga nee-117 zeerandi zokutshintsha. Ifana nefowuni yeHuawei izolo.
Ngelo xesha Akukho zinkcukacha zitsha zinikiweyo malunga nokuqaliswa kwale Honor 8S kwintengiso yamanye amazwe. Iya kuqaliswa kuqala e-China nakwezinye iimarike e-Asiya, ngaphambi kokufika eYurophu. Ukuba yimodeli yesiphelo esisezantsi akunakuze kubekho idatha ekhonkrithi ekufikeni kwayo kwintengiso. Nangona sinethemba lokuyibona eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Imbeko 8S: Uluhlu lokungena olutsha lwegama elitsha
I-OPPO A9: Uluhlu olutsha lwaphakathi lwegama lesiTshayina